Midowga Yurub oo ka hadlay kala qaadista doorashooyinka Somaliland | Gaaroodi News
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Somaliya Danjire Michelle Cervone d’Urso, ayaa sheegay in go’aanka uu Madaxweyne Siilaanyo dib ugu dhigay doorashadii golaha wakiilada, uu wiiqayo kalsoonidii beesha caalamka.
Danjire Michelle, oo isagoo magaalada Nayrobi ee dalka Kenya jooga xalay u waramay Wargeyska Geeska Afrika, wuxuu sheegay in la joogo wakhtigii shacabka Somaliland la siin lahaa fursad ay ku codeeyaan doorashada wakhtigii loo qoondeeyay.
Danjire Michelle, oo uu Geeska Afrika weydiiyay sida ay beesha caalamku u aragto go’aanka uu Madaxweyne Siilaanyo dib ugu dhigay doorashadii golaha wakiilada iyo saamaynta ay yeelan karto wuxuu ku jawaabay, “Kalsoonidiii beesha caalamka ayay wiiqaysaa. Xukunkii maxkamaddu aad ayaa uu u caddaa, dhinacyada ay arrintani (Doorashadu) khusayso oo dhamina waxa ay ku celcelinayeen in ay u hoggaansami doonaan xukunka, dib u dhigis dambana aanay jiri doonin.”
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu Danjire Michelle yidhi “Niyad wanaag ayaanu ku taageeri jirnay doorashooyinka si weynna ugu maalgelin jirnay, waxa aynu u soo dhabar adaygnay baarlaman aan la soo dooran muddo toban sano ah. Tani waxa ay hagardaamo ku noqonaysaa geeddi socodkii dimuqraadiyadaynta ee aanu soo habaynay tan iyo maalintii ay dhalatay. Waxaa la joogaa waqtigii aynu dadka siin lahayn fursad ay ku codeeyaan doorashada waqtigii loo qoondeeyey.”